जापानको टोकियो । तस्बीरः सीएनएन
मार्च महीनाको अन्तिमबाट अप्रिलको पहिलो सातासम्म जापानका साना ठूला पार्कमा साकुराको फूलसँगै हुने रमाइलो जमघट यस वर्ष कोरोनाकै कारण हुन सकेन । करीब तीन करोड जनसंख्या रहेको टोकियोका गभर्नर कोइकु युरिकोले क्षणिक रमाइलोका लागि जोखिम नमोल्न गरेको आग्रहलाई टोकियोबासीले सहर्ष स्वीकारे ।
जापान सर्वत्र यस्तै अवस्थामा छ । पार्क त के ठूला ठूला सपिङ सेन्टर लगायत हजारौंको भिड हुने स्थान पनि सुनसान छ । गतिमा अचानक ब्रेक लागेजस्तो ठप्प।
जस्तो अमेरिकाले सोचेको थियो, चीनको वुहानमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण अमेरिका आइपुग्ने छैन, आइनै हालै पनि औषधि पत्ता लगाइसकिने छ । जापानले पनि ठीक त्यस्तै सोचेको थियो । तर, यो महामारीलाई खेलाँची ठान्दै गरिएको विश्लेषण जस्तो मात्र भयो । गत सातादेखि कोरोनाको संक्रमणको त्रासले जापानीहरु असाध्यै भयभित देखिएका छन् ।
यसको कारक बन्न पुगे, सिमुरा केन । जापानका चर्चित यी हास्य कलाकारको गएको मार्च ३० मा कोरोना संक्रमणकै कारण निधन भयो। त्यसपछि भने आम जापानीलाई कोरोना शहर पसिसकेको अनुभूति भयो।
केनको निधनले जापानीसँगै जापानमा बस्ने करीब एक लाख नेपालीलाई पनि तर्सायो । किनकि केन जापानीमाझ होइन, जापानी भाषा सिक्न चाहने नेपाली समुदायमाझ पनि चर्चित थिए । उनको निधनमा धेरै नेपालीले सामाजिक संजालमा समवेदना प्रकट गरे ।
तिनैमध्येका नेपाली दिपक मैनाली जापानले चर्चित कलाकार गुमाए पनि सरकारले देखाएको मौनताले अझै पनि संकटको सही आकलन गर्न नसकेको पुष्टि गरेको बताउँछन् । उनको भनाइमा, स्थिति अझ भयावह हुने हो कि भन्ने त्रास छ, तर सरकारमा त्यस्तो बेचैनी देखिन्न ।
सरकारले दिनहुँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको जानकारी दिंदा म कामको सिलसिलामा टोकियो र करीब ३० किलोमिटर दूरीको चिवाको फुनावासी आउँदा जाँदा झस्किरहेको हुन्छु ।
जापान सरकारले विदेशबाट आएका जापानी तथा विदेशीलाई केही कडाइ गरे पनि अहिले पनि नारिता विमानस्थलबाट सोझै टोकियो प्रवेश गर्ने रेलमा दिनहुँ थुप्रै विदेशी भेटिन्छन् । यसले हरेक यात्रामा जोखिम बढाएको छ । किनमेल, रेष्टुरेन्टमा पनि उत्तिकै त्रास छ ।
जापानको डरलाग्दो मौनता
गएको सातादेखि कोरोनाको संक्रमण दोब्बरले बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै जापानवासीमा अन्योल छाएको छ । यो खबर तयार पार्दासम्म जापानमा कोरोनाका २२२९ संक्रमित देखिएका छन् जसमध्ये ७३ जना (डायमण्ड क्रुजका ११ जनाबाहेक) को मृत्यु भइसकेको छ ।
कोभिड १९ बाट निधन भएका हास्यकलाकार शिमुरा केन । तस्वीरः सीएनएन
डायमण्ड क्रुजमा ७१२ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । जापानी संचारमाध्यम एनएचकेका अनुसार, जापानमा दैनिक करीब २०० जनामा संक्रमण फैलिंदो छ ।
संवेदनशिलता विचार गर्दै राजधानी टोकियोका गभर्नर कोइकुले भने गएको शनिबारबाट अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेकी छन् । यसले प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेलाई देशमा ‘लकडाउन’ वा संकटकाल लगाउन दबाब बढेको विश्वास गरिन्छ । तर, आवे के सोचिरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन ।
त्यसो त झण्डै झण्डै संसारले नै महामारीका कारण यसै वर्षकोे जुलाईदेखि टोकियोमा शुरु हुने ओलम्पिक तथा पाराओलम्पिक खेल प्रतियोगिता स्थगन गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री आवे जसरी हुन्छ ओलम्पिक गराइछाड्ने जिद्दीमा थिए । तर, अन्ततः कोरोनाको बढ्दो मुलुक प्रवेशसँगै उनले पनि हार खाए । ओलम्पिक एक वर्ष पछि स¥यो ।
हो, खर्बौं लगानी गरिसकिएको प्रतियोगिताको आयोजक जापानका लागि यो केवल खेल मात्र थिएन, विश्वमाझ जापानी शक्ति र अर्थतन्त्र उस्काने महत्वाकांक्षी अवसर पनि थियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ, आवे एकपछि अर्को मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने कदम घोषणा गर्न चाहँदैनन्, देशलाई लकडाउन बेगर जसोतसो अहिलेको स्थितिमा धकेलिरहन चाहन्छन्।
केही भइहाले जनता र व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्ने उनको आश्वासनकै कारण हुनुपर्छ, टोकियो र अन्य ठूला शहर विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तो सुनसान छैन । तर, टोकियोका गभर्नर कोइकी लगातार चिन्तित देखिन्छिन् । “जनता चाहन्छन्— संक्रमण फैलन नदिन र जनतालाई त्रासबाट जोगाउन राज्यले केही गरोस् । संकटकाल वा लकडाउन जे भए पनि लगाइहालोस् । अहिलेजस्तो अन्योलमा बस्न नपरोस् ।”
जानकारहरु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३१ मार्चसम्म सरकारले कुनै पनि कदम नचाल्नुको पछाडि आर्थिक कारण नै प्रमुख रहेकोे दाबी गर्छन् । उनीहरुका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको शुरु भएको १ अप्रिलसँगै प्रम आवेले केही कदम चाल्न सक्नेछन्, किनभने, उनको विश्लेषण अबका केही समय मात्र पर्खन सके बाँकी तीन, चार महीनाको घाटा अर्थतन्त्र धान्न सकिन्छ । त्यसैले पनि आवेले ‘पर्ख र हेर’ नीति अख्तियार गरेको विश्लेषण गरिन्छ ।
त्यसो त शिक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबमा सबल जापानीहरु कोरोनाको रोकथामका लागि स्वयंले पनि धेरै सजगता अपनाएका छन्। जसका कारण बाक्लो जनघनत्व रहेका शहरहरुमा पनि कमै मात्र संक्रमित देखिएको छ । तर, बेलैमा सरकारले कठोर कदम नचालेको दुष्परिणाम देशले भोग्नुपरेमा त्यसको असर जापानीलाई भन्दा यहाँ बसिरहेका विदेशीलाई महँगो सावित हुनेछ ।
डेढ करोड जनघनत्व रहेको टोकियो तथा आसपासका राज्यहरु चिवा, साइतामा, खानागावा, लगायतका क्षेत्रमा पनि अप्रत्यासित रुपमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि यसको त्रास स्वाभाविक रुपमा यहाँ बसिरहेका नेपालीमा पनि परेको छ।
कोरोना भाइरसबारे बुभ्न जापानस्थित नेपाली दूतावासले गरेको अनलाइन छलफल ।
सञ्चारकर्मी समेत रहेका दीपक गौतमका अनुसार, एक लाख हाराहारी नेपाली रहेको जापानमा कोरोनाको प्रकोप बढिरहँदा संक्रमण सँगसँगै जीविकाको पनि चिन्ता थपिएको छ। संक्रमणको पहिलो असर, विद्यार्थीसँगै साना तथा मझौला कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीमा पर्नेछ । अप्रिल महीनादेखि विद्यार्थीबाट कम्पनी भिसामा भर्खरै परिवर्तन गरेकाहरु, डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेकाहरुलाई बढी असर पार्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानका महासचिव जनकविक्रम शाहीको आकलन छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्यासिफिक उपसंयोजक समेत रहेका व्यवसायी पारसमणि पोखरेल जापानमा हजारबढीको संख्यामा रहेका रेष्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायमा साना र मझौला व्यवसायमा संलग्नलाई यस्तो अवस्थाको सामना गर्न निकै कठिन हुने बताउँछन् । “तर, यस्तो बेला नेपालीहरु सुरक्षित रहनु पहिलो आवश्यकता हो, केही समयको धैर्यताले भोलि निरोगी बन्न सकिन्छ”, उनी भन्छन् ।
जनस्वास्थ्य विषयमा विद्यावारिधि गरेकी नेपाली रजिष्टर्ड नर्स डा. एलिजा केसी भण्डारी अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण बढ्दै गए नेपालीलगायत विदेशीमा शारीरिक, मानसिक समस्या थपिने बताउँछिन् । हालसम्म कोही नेपालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको भएपनि जापान सरकारको अन्योलले नेपालीहरुमा त्रास थपेको उनको भनाइ छ ।
एनआरएनए जापानको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी)मा कोरोना भाइरस महामारी सहयोग संयन्त्रकी संयोजक समेत रहेकी डा. केसी नेपालीमा महामारीबारे सचेतनाका लागि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पस्किरहेकी छन् । यस्तो अवस्थामा जापान सरकारले प्रदान गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्ड हरहमेसा आफूसँग राख्न तथा कार्ड नभएकाहरुले उपचार खर्चको बिल सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसो त टोकियोस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि हरेक दिनजसो विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुसँग अनलाइन छलफल चलाइरहेको छ। दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल महामारीको चक्रमा नेपालीहरु नपरुन्, परिहालेको खण्डमा पनि सहज सम्पर्क स्थापित गर्न सकियोस् भनेर आफूहरु सक्रिय रहेको बताउँछन् । यसका लागि हटलाइन सम्पर्क सेवासहित एनआरएनए तथा अन्य संघसंस्थासँग लगातार सम्पर्कमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्यालका अनुसार, दूतावासले भिसामा पर्नसक्ने समस्या समाधानका लागि जापानको परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने महामारीसँग सम्बन्धित सेवाबारे दूतावासको फेसबुक पेज तथा विभिन्न माध्यम मार्फत जानकारी गराइरहेको छ ।
महामारीको सम्भावित जोखिमसँग जुध्न एनआरएनए जापानले पनि छिट्टै नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्न लागेको संस्थाका महासचिव शाही बताउँछन्। उनका अनुसार, कोरोना संक्रमणकै कारण कसैलाई समस्या नहोस् भनेर जापानका चौधवटा क्षेत्रमा स्थानीय संयन्त्र मार्फत जनचेतना तथा सहयोग समिति मार्फत काम अघि बढाइने योजना छ।
जापान सरकारले ढिलोगरी गर्ने एक, एक निर्णयलाई नियालेर हेर्दा नेपालमा रहेका आफन्तहरुको दैनिकी नियाल्न फेसबुक तथा घरमा दिनहुँ फोन नगरी बस्न सकेको छैन। अझ यसै साताको तथ्याकंमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसमा पनि बढेको संक्रमणका कारण डर थपिएको छ। कार्यालयबाट रेष्टुरेन्ट जान छाडिएको छ।
अफिसमै बसेर टेलिफोनबाट काम गर्न गरेको आग्रहले केही राहत दिएको त छ तर जापान सरकारले रोकथामका लागि केही न केही कडा कदम चालोस् भन्ने कामना भने मनमनै गरिनै रहेको छु ।
(कोइराला नेपाल—जापान डटकमका सम्पादक तथा एनआरएनए जापानका सल्लाहकार हुन्।)